ပန်းပွင့် | သြဂုတ်လ 2021
2021 | တင်ပို့ Paul Adams | အမျိုးအစား: ပန်းပွင့်
Kamingchoe blossfeldiana သည်မီးလျှံ Katy ဟုလည်းလူသိများသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကသင့်တော်သောစောင့်ရှောက်မှုနည်းစနစ်များကိုသင်ပေးသည်။
ဂျာမန်ပညာရှင်ကြီးထွားလာသော Salvia chamaedryoides သည်မိုးခေါင်သည့်ဒဏ်ကိုခံနိုင်သည့် xeriscape သို့အရောင်များကိုသယ်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကြီးထွားလာအကြံပေးချက်များပေး!
နှလုံးပန်းပွင့်: Dicentra Spectabilis စောင့်ရှောက်မှု
သွေးထွက်နေသောနှလုံးပန်းသည်သဘာဝဘဏ္littleာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုမည်သို့ဂရုစိုက်ရမည်၊ မည်သို့ပျံ့နှံ့စေကြောင်းနှင့်ဤစက်ရုံလမ်းညွှန်တွင်ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်လေ့လာပါ။
ငွေဒေါ်လာစက်ရုံ (Lunaria Annua) ကြီးထွားလာလမ်းညွှန်
သင်၏ဥယျာဉ်၌ငွေဒေါ်လာတန်စက်ရုံ (lunaria annua) မည်သို့စိုက်ပျိုးရမည်ကိုလေ့လာပါ။ ငွေရောင်အမျိုးအနွယ်သီးတောင့်များသည်သင်၏ခြံထဲသို့လှပသောအဆင့်သစ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းပေးလိမ့်မည်။
Jacob's Ladder Plant Care: ကြီးထွားရန် Tall အပြာရောင်
သစ်ခွများသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအလှဆုံးပန်းများဖြစ်သည်။ ကြီးထွားမှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဤအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပန်းပွင့်များ၏ပျော်မွေ့ရန် Hydroponic orchids မည်သို့ကြီးထွားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။
Gaura Lindheimeri: ကြီးထွားလာ Lindheimer ရဲ့ Beeblossom
Gaura lindheimeri သို့မဟုတ် Lindheimer ၏ beeblossom သည်လိပ်ပြာပုံပန်းများနှင့်ချစ်စရာကောင်းသောနှစ်ရှည်ခံဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးထွားလာသောလမ်းညွှန်ကသင့်အားအကြံဥာဏ်များအားလုံးကိုပေးသည်။
Lobelia Laxiflora စောင့်ရှောက်မှု - ကြီးထွားလာသည့်မက္ကဆီကန်ဘုရှ် Lobelia
Lobelia laxiflora သို့မဟုတ်မက္ကဆီကန် Cardinal ပန်းသည်စိမ်းလန်းသောဥယျာဉ်များအတွက်ခြောက်သွေ့သောရာသီဥတုပင်ဖြစ်သည်။
Rudbeckia Maxima ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု - ကြီးထွားလာသောCရာမ Coneflowers
Rudbeckia maxima (သို့မဟုတ်) ကြီးသော coneflower သည်ယနေ့သင်၏ဥယျာဉ်တွင်ကြီးထွားရမည့်သမင်ယဉ်သတ္တုရိုင်းပန်းများဖြစ်သည်။
အိုင်ယာလန်၏ခေါင်းလောင်း: ကြီးထွားလာသော Moluccella laevis
Bachelor Buttons - သင်၏အိပ်ရာအားပိုမိုကြည်လင်စေရန် Cornflowers နှင့် Blue Caps
ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးပန်းတစ်ပွင့်၊ လူပျိုခလုပ်များကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင် cornflowers ဟုခေါ်ကြသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် 'cornflower blue' သည်၎င်း၏အမည်ကိုရရှိသည်! လွယ်ကူသောပန်းများကိုရှာဖွေနေပါသလား။ Bachelor ခလုတ်များသည်သင့်အား cornflower အပြာရောင်မှပန်းရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်များသို့အရိပ်အမျိုးမျိုးပေးလိမ့်မည်။ ဤနေရာတွင်မည်သို့လေ့လာပါ။
ယခင်ကသစ်ခွများသည်ရှားပါးသည်။ မဟုတ်တော့ပါဘူး! ဒီသစ်ခွမျိုး ၇ မျိုးဟာသင်ထင်ထားတာထက်ဂရုစိုက်ဖို့ပိုလွယ်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဘာလို့မကြီးထွားစေတာလဲ။
Black Eyed Susan: Rudbeckia အပင်များကိုမည်သို့ကြီးထွားရန်နှင့်စောင့်ရှောက်ရမည်နည်း
သငျသညျအနက်ရောင်မျက်လုံး susan သို့မဟုတ်အခြား Rudbeckia မျိုးစိတ်အပင်များကြီးထွားချင်လျှင်, ငါတို့လမ်းညွှန်ကသူတို့ကိုကြီးထွားခြင်းနှင့်ပြootနာဖြေရှင်းနည်းကိုအတိအကျပြသပါလိမ့်မယ်!
သင်၏ဥယျာဉ်၌နွေရာသီပန်းပွင့် ၄၀ ကျော်
ပန်းဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်းသည်ပန်းဥယျာဉ်တွင်အစပြုရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Asters ကြီးထွားရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးနွေရာသီဥယျာဉ်မှလှပသောထို့အပြင်!
Phlox တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်မျိုး၊ Phlox Mounding: နှစ်ရှည်အပင်များစိုက်ပျိုးရန်လွယ်ကူသည်
Phlox ပန်းများသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောပန်းများဖြစ်ပြီးအနီရောင်၊ ပန်းရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ သင်သည်တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးဖြစ်စေ၊ phlox မျိုးကွဲများကိုရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးထွားလာသောလမ်းညွှန်၏အကူအညီဖြင့်ကြီးထွားရန်လွယ်ကူပါသည်။
ပန်းချီကားမှူး Daisy: Pyrethrum များပြားလာခြင်း
ဆေးသုတ်ထားသော daisy, tanacetum coccineum သည်လှပသောပန်းပွင့်နှစ်ရှည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိုက်ပျိုးသူများ၏လမ်းညွှန်ကသင့်တော်သောနည်းကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမည်ကိုပြောပြသည်။
Globe Thistle: လှပပြီးလှပတဲ့ပန်းပွင့်များ
ခရမ်းရောင် Passion ပန်း (Passiflora Incarnata) စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
ခရမ်းရောင်စိတ်အားထက်သန်မှုပန်းပွင့်ဟုလည်းလူသိများသော passionflower (passiflora incarnata) သည်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိသည့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပန်းတစ်ပွင့်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်မည်သို့ကြီးထွားရမည်ကိုလေ့လာပါ။